စင်ကာပူမှာ အလှူငွေ စတင်ကောက်ခံပြီ — MYSTERY ZILLION
စင်ကာပူမှာ အလှူငွေ စတင်ကောက်ခံပြီ
February 2009 edited March 2009 in MZ News
အားလဲနာတယ် ခင်လဲ ခင်တယ်လေ။ မပြောမပြီး မတီးမမြည်ဆိုတော့ ပြောရတော့မှာပေါ့။ အများသူငါ သိပြီးကြသည့်အတိုင်းပါဘဲ။ ဧပြီလတွင် MZ ၏နှစ်ပါတ်လည်ပွဲပြုလုပ်ရန်အတွက် စီစဉ်နေကြပြီဖြစ်ပါတယ်။ ပွဲအတွက် ကြိုတင်စီစဉ်ရန်ရှိသည်များ ကြိုတင်စီစဉ် ငွေကြေးလည်ပါတ်သုံးစွဲနိုင်ရန်အတွက် စင်ကာပူမှမင်ဘာများကလဲ တစ်တတ် တစ်အား ပါဝင်ကူညီပံ့ပိုးနိုင်ကြစေရန် အကျိုးမျှော်၍ နှိုးဆော်ရပါပေတယ်ခင်ဗျား။
နဲသည်များသည် သဘောမထားပါဘဲ စိတ်အားထက်သန်စွာဖြင့် တတ်အားသမျှလေး ပါဝင်ကူညီကြပါဦးလို့တိုက်တွန်းလိုပါတယ်ခင်ဗျား။ ပြီးခဲ့တဲ့ အခေါက် ဆာဗာ ဒေါင်းသွားတုန်းက ဆာဗာအသစ်ပြောင်းရွှေ့ရန် အလှူခံခဲ့ရာမှာလည်း အနည်းဆုံး စင်ကာပူ ဒေါ်လာ ၅ မှ အများဆုံး ၁၅၀ အထိ သူ့ထက်ငါ အပြိုင်အဆိုင် အလုအယက် လာရောက် ကူညီထောက်ပံ့ လှူဒါန်းသွားခဲ့ကြပါတယ်။
ဒီတစ်ခေါက်ကတော့ နှစ်ပါတ်လည်ပွဲဖြစ်မြောက်ရေးအတွက် ကျွန်တော်များ စင်ကာပူမင်ဘာများမှ တတ်အားသမျှလေး လှူဒါန်းကြပါဦးမယ်လို့ အကျိူးမျှော်ကာ နှိုးဆော်ရပါပေတယ် မင်ဘာများခင်ဗျား။
ယနေ့မှ စတင်၍ ဖေဖေါ်ဝါရီ ၂၇ ရက်နေ့အထိ ငွေများကို ကောက်ခံသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ ရန်ကုန်ရှိ ပွဲစီစဉ်သူများ ကြိုတင်စီမံခံ့ခွဲနိုင်ရန်အတွက် ဖေဖေါ်ဝါရီလကုန် (၂၈-၀၂-၂၀၀၉ - စနေနေ့) တွင် ရန်ကုန်သို့ ငွေလွှဲပို့မယ်ဖြစ်ပါတယ်။
စင်ကာပူရှိမင်ဘာများ ကျွန်တော့်ထံ ငွေလွဲနိုင်ရန်အတွက် ကျွန်တော့်ကို ဆက်သွယ်ရန် လိပ်စာကို http://www.mysteryzillion.org/forums/showthread.php?t=1191 ဒီမှာကြည့်နိုင်သလို ကျွန်တော့်ထံ PM ပို့၍လည်း ဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်။
အလှူငွေ စတင်ရရှိတာနဲ့ ဒီနေရာမှာ စာရင်းကို ဖေါ်ပြပေးသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အကယ်၍ စာရင်းမှာ နာမည်မဖေါ်ပြစေချင်ရင်လည်း တစ်ခါတည်း တောင်းဆိုနိုင်ပါတယ် သို့ပါလျှင် နာမည်မဖေါ်ပြဘဲ ငွေသားဘယ်လောက် ရကြောင်းသာ ဖေါ်ပြပေးပါမယ်။
ကျေးဇူးအများကြီး တင်ရှိကြောင်း ။
(စင်ကာပူမင်ဘာများ တွေ့ဆုံပွဲတုန်းက မင်ဘာများကို မျှော်လင့်တကြီးဖြင့် ကြည့်နေပါကြောင်း :P:P အထူးသဖြင့် အီကြာကွေး အများကြီးစားသော သူများ ... :71:)
February 2009 edited February 2009 Administrators
၁၂-၀၂-၂၀၀၉ မှ ၂၇-၀၂-၂၀၀၉ အတွင်း ကောက်ခံရရှိငွေ စာရင်း
၁) (ကို) dotnetCrazy SGD - 50 (12-02-2009)
၂) (ကို) zenithsbo SGD - 30 (12-02-2009)
၃) (ကို) ko-edit SGD - 65 (35 EURO) (20-02-2009)
၄) (ကို) puluque SGD - 30 (20-02-2009)
၅) (ကို) everlearner SGD - 30 (21-02-2009)
၆) (ကို) zack SGD - 30 (22-02-2009)
၇) (မ) QueenW SGD - 30 (24-02-2009)
Total = 265 SGD
ခုလို လှူဒါန်း ပံ့ပိုးကြတဲ့အတွက် အများကြီး ကျေးဇူးတင်ပါကြောင်း။
MZ Admin Team
အလှူငွေ ထည့်ရင်လည်း အီကြာကွေးကျွေးဦးမှာလား.........
အီကြာကွေးများများစားတာကတော့ အနော်သိတယ် ..လိုက်တောင်မှတ်ထားသေးတယ်... ဘယ်နှခုဆိုတာကို......
ဟဲဟဲ နောက်တာနော် .......:d
၂၇ ရက်နေ့က နောက်ဆုံးလား ....လစာက လကုန်မှရမှာလေ...နောက်နည်းနည်းမဆုတ်တော့ဘူးလား
ကျနော် ဒီကပဲလှူလိုက်တော့မယ် အိုကေ ?????
Donation အဖြစ်ထည့်ဝင် ကူညီကြပါသော ကို dotNetCrazy နှင့် ကို zenithsbo တို့အား ကျေးဇူးတင်ပါကြောင်း။
MZ Admin Team.
ကျနော် စေတန်ဆီလှူလိုက်ပီ ကိုဒီဘီရေ.....
ကိုဒီဘီရေ အီကြာကွေးကို လတ်တစ်လော ခဏပြန်ဝယ်ပေးထားမယ်လေ။:D ကြံလိုက်ဖန်လိုက်ဦးမယ် ဒီနှစ်ပါတ်အတွင်း Part-Time လေးဘာလေး နည်းနည်းရှာလိုက်ဦးမယ်။:D အဝတ်လျော်မယ့်လူတွေ ဘာတွေရှိရင်လည်းပြောဦး ဒီရက်ပိုင်းအတွင်း ခဝါသည်လုပ်သင့်လည်း လုပ်မှဖြစ်မယ်ထင်တယ်။ ဒါပေမယ့် အဝတ်လျော်စက်ရှိတဲ့ အိမ်မှာမှလုပ်မှာနော်။:D ဒီရက်ပိုင်း ပိုက်ဆံ ရှာမရတော့လည်း မွေးသမိခင်ဆီကပေါ့ဗျာ။:D
စလုံး ၅၀ ရောင်းထားတယ်နော်။ အခုထက်ထိ exiter ဆီကနေ ပေါက်စျေးမသိသေးလို့။ သိသိချင်း စာရင်းအသစ်ပြန်တင်ပေးမယ်နော်။ ကို DBA ရဲ့ ၁သောင်း၁ထောင်ကို တီလေးဆီကရတယ်။ မနက်ဖြန် ကိုသာသာ နဲ့ ကို Box ပို့လိုက်တာ သွားယူလိုက်အုံးမယ်
ကိုသာသာ တစ်ပြားမှာ မပို့ရသေးပါ။ ကို Box ရဲ့ လှုငွေကို မူရင်းအတိုင်း
လခ မရသေးတော့ ဒီထဲမှာတောင် post ၀င်မရေးရဲသေးတာသာကြည့်တော့။:D
ငှဲငှဲ .. ဒီအရေးတွေမြင်လို့ အီကြာကွေးနဲ့ ထောင်ဖမ်းလိုက်တာ .... :d အလကားစတာပါဗျာ။ ကျောင်းသားဘဲဟာ စိတ်ထဲမထားပါနဲ့။ နဲသည်များသည် သဘောမထားပါဘူး :71:
exiter ဆီက USD2ရော မရဘူးလား ဟင် ...... စာရင်းထဲထည့်နော် :P
ရန်ကုန် ကိုစေတန်ဆီသို့ တိုက်ရိုက် လှုဒါန်းကြသူများကိုလဲ ကျေးဇူးတင်ပါကြောင်း။ အဆင်ပြေသလို လုပ်ကြပါလို့။
ကို edit မှ ငွေလွှဲထားပါတယ် .. သွားမထုတ်ရသေးပါ ရပြီးလျှင် စာရင်းထည့်ပါမည်။ အဒူမှ မဆက်သွယ်ကြတော့ဘူးလားဟင်။ ကြံရာမရလို့ တစ်ခုခုတော့ လုပ်ရပါဦးမယ်။ ကဲလာထား ......
ဟဲဟဲ ... အတုမြင် အတတ်သင်ဆိုတာမျိုးပေါ့။ ခွိခွိ။ :71:
(လူပျိုကြီးတို့ တယ်ငြိမ်နေပါလား ... ဒီတော့ပစ်ကို လာကို မလာဘူး ဟွန်း:P)
ဟဲ့ ဟဲ့ လုပ်ပါဦး အိတ်ထဲက ပိုက်ဆံတွေ ခုန်ထွက်နေပြီ။ ....
နောက်တောင်ကျနေပါပေါ့ :2: :2:
မောင်ပြုံးကနေတစ်ဆင့် ဒီမှာပဲထည့်၀င်လိုက်တော့မယ်ဗျာ နော်???
ကြောင်လေးကောင် အစွမ်းပြကြတယ်။ ဒီနေ့ အလှူငွေ ၆၀ ရတယ်။
(လူပျိုကြီးကို မိအောင်ဖမ်းဖို့ ကြောင် ခပ်ကြီးကြီး လိုချင်ပါတယ်)
သေးနေလို့ 60 ပဲရတာထင်တယ် ကျွန်တော် အကြီးကြီးတင်လိုက်မယ်
အဲ တိုးပစ်လေး ကျွန်တော့်ကြောင့် လွဲနေပြီထင်တယ် ဆောရီဗျား
ကိုလူပျိုကြီး ကိုလည်းဖမ်းဖို့ လောက်တယ်မလား ကိုဒီဘီအေ ကြီး
မင်ဘာများခင်ဗျား ကောက်ခံရရှိငွေ စင်ကာပူဒေါ်လာ ၂၆၅ ကို မနေ့က စီးတီးဟော မှ ငွေသွားလွှဲခဲ့ပါတယ်။ ယမန်နေ့ပေါက်ဈေး ၁ စင်ကာပူဒေါ်လာ = မြန်မာ ၆၅၀ လဲနှုန်းအရ မြန်မာငွေ ၂ သိန်းမပြည့်တဲ့ အတွက် လိုအပ်ငွေကို စိုက်ကာ ရန်ကုန်သို့ မြန်မာငွေ ၂ သိန်းတိတိကို လွှဲအပ်လိုက်ပြီး ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျား။
စေတန်ထံသို့ pm ပို့၍ မည်သို့ မည်ပုံငွေထုပ်ယူရမည်ကို ပြောပြပြီးဖြစ်ပါတယ်။ မောင်စေတန်မှ ငွေလက်ခံရရှိပါက ပြန်လည် အကြောင်းကြားပေးပါရန်။
ကျေးဇူးအများကြီး တင်ပါတယ် မင်ဘာများခင်ဗျား။
ဖေဖေါ်ဝါရီ - ၂၈ ရက်နေ့က ကောက်ခံရရှိငွေများကို ရန်ကုန်သို့လွှဲပြီးသော်လည်း စေတနာရှင်မင်ဘာများမှ အလုအယက်လာရောက်လှူဒါန်းနေပါသောကြောင်း အခြားသော မင်ဘာများလဲ လှူချင်မလားဟူသော စိတ်ကူးဖြင့် မတ်လကုန်အထိ ထပ်မံအလှူခံစာရင်းဖွင့်လှစ်လိုက်ပါပြီ။ (ဂျစ်ပဆီလေးရေ ကြောင်ရုပ်ရှာဦးဟ)
sgd 50 (7-03-2009)
ပထမအသုတ်ပို့ထားသော ၂ သိန်းကိုလဲ ဘုတ်အက်ဒမင် ကိုစေတန်မှ လက်ခံရရှိကြောင်း pm ပို့လာပါသဖြင့် ဒီနေရာမှ မှတ်တမ်းတင်အပ်ပါသည်။